June 5, 2022 - Barnyar Barnyar
June 5, 2022 thanzin laypyay 0
ယောကျြား-ဆိုတာ-မယုတျမာဖို့ပဲ-လိုတာပါ မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ တငျ ရငျတှေ ကွညျ့ပွီး အပြိုစဈလား? မစဈလား? ဝဖေနျနတေဲ့ တဈခြို့ကောငျတှေ… မငျးတို့ရော လူပြိုစဈရဲ့လား? ရမလားစမျးတာ… ယောကျြားသဘာဝလို့ မပွောပါနဲ့ … အဲ့ဒီစကားတဈခှနျးကွောငျ့ မိနျးကလေးပေါငျးမြားစှာရဲ့ အရှကျသိက်ခာ နဈနာမှုတှေ ဘယျလောကျမြားပွီးလဲ ကိုယျခငျြးစာမိရဲ့လား… အိုငျတှလေို့ ခွဆေေးမယျ ဆိုကတညျးက ကိုယျခွထေောကျက […]
ခတျေပျေါဆေးဝါးတှေ-ဝယျယူရနျ လကျလှမျးမမှီတဲ့သူ၊ ခကျခဲသူတှအေတှကျ ညှငျးပြောကျတဲ့ဆေးနညျးလေး-မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ…
ခတျေပျေါဆေးဝါးတှေ-ဝယျယူရနျ လကျလှမျးမမှီတဲ့သူ၊ ခကျခဲသူတှအေတှကျ ညှငျးပြောကျတဲ့ဆေးနညျးလေး-မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ… လကျတငျဖွငျ့ Cassia Toraဟုချေါပါသညျ။ လူအတျောမြားမြား အဖွဈမြားကွ၏။ ဆိုရပါသျော အရပွေားမှိုရောဂါ ဖွဈသညျ။ မိမိအသား အရောငျထကျ ပို၍ဖွူနခွေငျး၊ ပို၍ရငျ့နခွေငျးဖွဈသညျ။ အခြိနျကွာမွငျ့လာသညျနှငျ့ အမြှ တဖွညျးဖွညျး ပှားလာ တတျလသေညျ။ ရငျးဘတျ၊ ပါးပွငျ၊ဂုတျသား၊ ကြောပွငျ ၊လကျမောငျး၊ […]
ရှေးဟောင်းငွေစက္ကူဈေးကွက်အတွင်း တစ်ရွက်ကို-သိန်းချီတန်နေတဲ့ ရှားပါး-မြန်မာ့ငွေစက္ကူများ
ရှေးဟောင်းငွေစက္ကူဈေးကွက်အတွင်း တစ်ရွက်ကို-သိန်းချီတန်နေတဲ့ ရှားပါး-မြန်မာ့ငွေစက္ကူများ စံလင်းနဲ့မောင်ကောင်းပိုက်ဆံက ရှားလည်းရှားတယ်။ ဈေးလည်းအများကြီး ပိုရတယ်ဗျ။ ဒီနှစ်ခုမှာတောင် မောင်ကောင်းကပိုရှားတယ်။ကျွန်တော်လည်း တစ်ခါနှစ်ခါလား တွေ့ဖူးသေးတယ်” ဟု ရန်ကုန်မြို့၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ ရှေးဟောင်းငွေစက္ကူ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သူ ကိုမျိုးနိုင် (အမည်လွှဲ)က ပြောပြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုလိုနီခေတ်ကနေပြီး အခုလက်ရှိအချိန်အထိ ခေတ်အဆက်ဆက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ငွေစက္ကူအမျိုးအစား […]
“နန်းတွင်းသူခိုးနှင့်မိန်းမစိုး” သီပေါရွှေနန်းရှင်နှင့် မိဘုရားခေါင်ကြီးစုဖုရားလတ်တို့၏ ပထမသမီးတော်ကြီး(အသျှင်ထိပ်စုမြတ်ဘုရားကြီး)အနှီးတွင်း အရွယ်တုန်းကဖြစ်သည်။သူခိုးဟူသည် ကျေးလက်ဇနပုဒ်မှအစ မြို့ကြီးနန်းတွင်းအထိ ရှိစမြဲပင်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်နေရာဒေသမရွေးသူခိုးရှိသဖြင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူများလည်း ရှိသည်ချည်းပင်။ ယခုကိစ္စမှာ… ဘုရင့်စံနန်းအတွင်းဖြစ်သည့်အပြင် အစောင့်အကြပ်များတင်းကြပ်စွာချထားသော အနောက်ဆောင်တွင်ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့ပဒေသရာဇ်ခေတ်တွင် နန်းရ၊ဆောင်ရ၊ မိဘုရားကြီး၊မိဘုရားလတ်၊မိဘုရားငယ်၊ထိပ်ခေါင်တင်မင်းသမီးများတို့ကို အပျိုတော်များ၊အပျိုများ၊မောင်းမမိသံများ နေ့ညဥ့်မပြတ်ခစားနေကြသည်။ ယင်းအဆောင်များတွင် အဆင့်အတန်းအသီးသီးမှ အမျိုးသမီးပေါင်းများစွာ ရှိကြသည်။၎င်းမိန်းမများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်မှာ […]
Hits Today : 8961
Total Hits : 318669